MSVCR100.DLL NA-EFU, MMEMME IGBA EGBE AGAGHỊ EKWE OMUME - IHE ỊME? - WINDOWS - 2019
Msvcr100.dll na-efu, mmemme igba egbe agaghị ekwe omume - ihe ịme?
Mbụ banyere ihe ị na - ekwesịghị ime - echela ebe ị ga - ebudata faịlụ msvcr100.dll maka Windows 7, Windows 10 ma ọ bụ Windows 8 maka n'efu, arịrịọ a ga - eme ka ị banye na saịtị ahụ a na - enyo enyo, nakwa, ọ bụrụgodị na enwere faịlụ mbụ , ma ị ga-ama "ebe ị ga - atụfu" faịlụ a, o yikarịrị ka ọ gaghị enyere gị aka ịme egwuregwu ahụ ma ọ bụ mmemme ahụ.
Ugbu a, n'eziokwu, ihe a ga-eme ma ọ bụrụ, mgbe ngwa ahụ malitere, ọ na-ekwu na enweghi ike ịmalite ihe omume ahụ n'ihi na enweghị msvcr100.dll na kọmputa ma ọ bụ na ntinye usoro ahụ adịghị na DLL na faịlụ a. Hụkwa: Gịnị ma ọ bụrụ na msvcr110.dll na-efu, msvcr120.dll na-efu
Ebee ka ibudata mbụ msvcr100.dll na otu esi esi wụnye ya iji mee ihe omume
Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla na faịlụ dll, ihe mbụ ị ga-agbalị ime bụ ịchọpụta ihe faịlụ ahụ bụ: dịka iwu, ha niile bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ ọ bụla, dika DirectX, PhysX, Microsoft Visual C ++ Redistributable na ndị ọzọ. Na mgbe ịmachara ya, ihe niile fọdụrụnụ ka ị gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye mmepụta nke akụrụngwa a ma budata ya na kọmputa gị, ọ bụ n'efu.
Msvcr100.dll bụ akụkụ dị mkpa nke ngwa Visual C + na redistributable maka Visual Studio 2010 (ma ọ bụrụ na e debeworị ya, gaa na nchịkwa nchịkwa - mmemme na components, wepu ya ma degharịa ya). Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata faịlụ a, ọ bụrụ na ịkwesighi ịga na saịtị "niile DLL enweghị nnwere onwe, budata ma tinye regsvr32, wdg," ebe ọ nwere ike ịnweta nsonaazụ ọjọọ, ma budata na saịtị Microsoft ahụ (ma ọ bụrụ tinyeworị, gaa na nchịkwa nchịkwa - mmemme na components, wepu ya ma degharịa ya).
Ya mere, ọ bụrụ na akwụkwọ msvcr100.dll na-efu ma, dị ka Windows na-akọ, enwere ike ịmalite ihe omume a, mgbe ahụ, ị ​​nọ ebe a (dị mkpa: ọ bụrụ na ị nwere Windows 64-bit, ị ga-arụrịrị akwụkwọ x64 na x86 nke ụlọ akwụkwọ ọhụụ, ebe ọtụtụ egwuregwu na mmemme chọrọ x86 ọbụna na usoro 64-bit):
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=14632 (x64 Version)
http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=5555 (x86, 32-bit)
Nzọụkwụ ndị ọzọ dị mfe - ị ebudatara, arụnyere, Malitegharịa ekwentị gị, mgbe nke a gasị ị nwere ike ịnwa ọzọ ịmalite usoro ihe omume ma ọ bụ egwuregwu ahụ, ma eleghị anya, n'oge a, ihe nile ga-aga nke ọma.
Otu esi dozie Msvcr100.dll Njehie - Video
M na-achọpụta na n'ọnọdụ ụfọdụ, njehie msvcr100.dll enweghi ike kpatara ya site na enweghị faịlụ a, kama site na ihe ndị ọzọ, dị ka oku ezighi ezi site na mmemme ahụ. Ọzọkwa, na ụfọdụ, ichikota faịlụ site na ebe mbụ ya (System32 ma ọ bụ SysWOW64) na nchekwa ahụ na faịlụ nwere ike inye aka dozie nsogbu ahụ na nmalite.